In ka badan 100 tahriibayaal ah oo ku dhintay xeebaha Liibiya - Halbeeg News
In ka badan 100 tahriibayaal ah oo ku dhintay xeebaha Liibiya
ROMA (HALBEEG)- Sida ay sheegeen dhaqaatiirta aan xuduudda laheyn ee MSF in ka badan 100 tahriibayaal ah oo ku safrayay laba doomood ayaa ku dhintay xeebaha Liibiya horaantii bishan aynu ku jirno ee September xili ay doonayeen in ay u gudbaan Yurub.
Sida ay hay’addan gargaarka caalamiga ah ku sheegtay qoraal ay ku daabaceen mareegtooda, dadka ugu badan tahriibayaashani wax ay kasoo wada jeedeen dalalka Suudaan, Maali, Nayjeeriya, Kaamiruun, Gaana, Liibiya, Aljeeriya iyo dalka Masar.
Mid kamid ah doomaha ayaa quustay kadib markii ay cilad ku timid matoorkii doonta halka doonta labaadna ay biyo ku faafeen, qaar kamid ah dadkii badbaaday ayaa haatan la dabiibayaa.
“Wax ay ahaayeen 165 qof oo waaweyn iyo 20 caruur ah” ayuu u sheegay MSF mid kamid ah dadkii ka badbaaday doomahii quusay.
55 qof kamid ah dadkii doomaha saarnaa ayaa badbaaday kadib markii ay soo gaartay mid kamid ah diyaaradaha qumaatiga u kaca oo ay wateen dhaqaatiirta aan xuduudda laheyn ee MSF kuwaa oo tahriibayaasha u daadiyay jaakadaha aan biyaha quusin.
“In ka badan 20 carruur ah ayaa dhintay oo ay ku jiraan laba mataano oo 17 bilood jiray” ayaa lagu yiri warbixinta waxaana wax aana warkaa laga soo xigtay mid kamid ah dadkii ka badbaaday doonta.
MSF ayaa ku baaqday in la joojiya xarigga sharci darrada ah ee loo heysto kumanaanka qaxootiga iyo tahriibayaasha ah ee ku sugan Liibiya.
Dhimashada shilkii diyaaradeed ee Koonfurta Sudan oo korortay